Ungandibatsira here nemamwe mawebsite e-backlinks mumagariro evanhu?
Hungu, kune dzakawanda dzakasiyana-siyana dzekuchengetedzwa kwemashoko ewebhu uye mapurogiramu anowanikwa paIndaneti nepamusoro pe PageRank uye DA (chiremera chemasimba), izvo zvinogona kubatsiridza nzvimbo dzekubatanidzwa ne. Usati watarisa mawebsite akanakisisa e-backlinks mumagariro evanhu, ona kuti pasi apa ndichaenda kuzokuratidza iwe chete mazano makuru - sezvaunogona kunge watoziva kare neshumba yezvikwata zvevanhu vakawanda. Saka, ngatitarisei kuti tingavaka sei kuvepo kwako paIndaneti uye nenzira ipi yaunofanira kudyara nayo zvinyorwa zvemashoko makuru. Muzvokwadi, zvose zvaunoda ndezvekupa huwandu hunokosha kumaposita ako. Yeuka, iwe unofanirwa kuunza humwe huwandu nehuwandu hwako - cheapest dedicated server 2013. Chinhu ichi ndechokuti tsvina yese yezvinyorwa zvako pamusoro pehupfumi inofanira kuva yakakosha uye inofanidza zvido zvako. Kunze kweizvozvo, ndinotenda kuti kuita zvinhu zvose kugoverwa uye sekugamuchira kugadzirisa sezvinobvira ndiyo nzira chete yekurarama nekuramba kunze kwekukwikwidzana kwakasimba kunotya nyika yezvino yehupfumi. Kusvika ipapo, ngatitarisei mawebsite akanakisisa e-backlinks kunze uko.
Iyi mitambo yakakurumbira inogona kunge iri pakati pepawebsite yepamusoro yeforlinks mumasangano evanhu. Ichokwadi, LinkedIn ine nzvimbo dzakawanda dzakasiyana dzakasiya musuo wakazaruka kuti uite boka rekubatana kwekukosha. Pano unogona kuwedzera mazamu ehumwe, pamwe nekubatanidza kune zvigaro zvenguva pfupi, nezvimwe zvakanyatsotsanangurwa pane nzvimbo huru yako.
Pinterest inoratidza mitsipa yakasimba pane iyo inouya kune zvakanyatsogadziriswa zvakagadzirwa, zvakadai se DIY. Ichi chikwata chakanaka zvakare kugadziridza chikamu chemashoko enyu akawandisa mune chimwe chinhu chinowanikwa uye chekuona maziso asi ichiri kudzidzisa, ini. e. , infographics, spreadsheets, nezvimwe zvakadaro. Chirevo: Kushandisa Pinterest kuvaka mazano maererano nehukuru hwekuvakira yako shandi yekugadzira kungava nekuwedzera kwekuita, saka usazeza kuyananisa iyi neimwe nzvimbo dzakanakisisa dzewebsite yeverlinks.
Kunyanya iyi shanduro inowanzoregwa. Nokudaro hazviwanzo kutaurwa pakati pezvinyorwa zvakanakisa zvemashure endangariro dzevanhu. Uye ichocho ndechokuti Instagram inogona chaizvo kuva yendarama chaiyo-yakapiwa kuti une mifananidzo yakaisvonaka uye yakachenjera, pfungwa dzekusika dzekugadzirisa zvekuona zviri mukati. Cherechedza, zvisinei, kuti vatengesi vedhijitendi vanounganidza ipapo vakaita kuti nzvimbo yacho ive yakaoma kune iyo yakakonzerwa nemakwikwi emakemikari akaoma.
Dzimwe nguva dzakapfuura, dzimwe nhengo dzehupfumi, pamwe neaya ari paGoogle, dzinogona kunge dziine uwandu hushoma kupfuura hukama hunowanzowanzoita. Zvechokwadi, kusaenzana uku kwave kwakabviswa zvakabudirira nePenzi yakakurumbira purogiramu yekuvandudza. Kunyange zvakadaro, chikwata chekugarisana nevekutsvaga kwenyika ino chichiri kukosha kukanda mamwe mazano anokosha pane chero mamiriro ezvinhu. Ingoyeuka-kubatanidza kuGoogle + inzira inofungidzirwa kuti inogona kukurumidza kukurumidza uye inobudirira kunyora.
Ndizvozvo! Takazopedzisira tasvika nenzira iyi yakanakisisa yekuvaka backlinks. Tichifunga kuti kushandisa Tumblr yekugadzira zvigaro ndeye basa rakaoma. Kunyange zvakadaro, zvakakosha kuti uzviedze pachako pamudziyo unozivikanwa chaizvo - kana uine backlink yakanaka uye ukaita kuti ipararire, unogona kuwana mikana yekuvaka yakawanda isina kukwana mukati megore - nekuda kwezviuru makumi maviri zve subdomains paTumblr.